NLD ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » NLD ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်
NLD ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်
Posted by True Faith on Aug 19, 2010 in Myanma News |9comments
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် – NLD က နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြောင်း ယနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
ပါတီ ဒု – ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနေအိမ်တွင် ပါတီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်များနှင့် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံ စည်းဝေးပြီးနောက် ယခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများသည် ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ရရှိရေးကို ဦးမတည်သဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြည်ပအခြေစိုက် မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနကို ပြောကြားသည်။
ယနေ့ ချမှတ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ မဲမပေးဘဲ နေလိုက နေနိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသေးသည်။
အန်အယ်ဒီသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများမှာ တရားမျှတခြင်း မရှိဟုဆိုကာ ယခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တာတော့မှန်ပါတယ်…အစိုးရကိုသပိတ်မှောက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ…အားလုံးညီညီညာညာနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို တိုက်ထုတ်ကြပါစို့…
ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးကြောက်နေပြီးဒီလိုသာ နေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မကြာခင်အချိန်မှာ ဒီထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကို အားလုံးရင်ဆိုင်၇တော့မယ်အသေအချာပါဘဲ။ ကြံ့ခိုင်ရေးလို အသင်းမျိုးသားအပြတ်အသတ်နဲ့နိုင်သွားခဲ့မယ် ဆိုရင် ဦးနှောက်မရှိတဲ့ သူအများစုကို အာဏာလွှဲပေးလိုက်ခြင်းပါဘဲ။
NLD ၇ဲ့၇ပ်တည်ချက်ဖြစ်တဲ့ “ေ၇ွးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ေ၇းဟာ” မှန်ကန်တဲ့၇ပ်တည်ချက်တခုဖြစ်ပေမဲ့၊ စစ်အစိုး၇၇ဲ့ေ၇ွးကောက်ပွဲ (မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း) အောင်မြင်ေ၇းကိုဘယ်လိုမှအပြောင်းအလဲဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒိုင်လူကြီးလုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ဝင်ပြိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်အနိုင်နဲ့ပိုင်း ကြေငြာမဲ့ အစီအစဉ်ကိုလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာကသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ၇ာမှာကျွန်တေိာတို့အားလုံးမျက်ခြေပြတ်နေတဲ့(ဒါမှမဟုတ်)လမ်းမှားနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေတဲ့အဓိကအမှားကြီးကိုသတိပြုမိကြဘို့လိုပါတယ်။ မြန်မာလူထုအဓိကလိုအပ်ချက်ကစား၊၀တ်၊နေေ၇းနဲ့နေ့စဉ်ဘ၀၇ပ်တည်၇ှင်သန်ေ၇းကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအဲ့ဒီကိစ္စ ကိုနေ့ချင်းညချင်းဖြေ၇ှင်းပေးနိုင်လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြပါ။ မထင်။….
တကယ်လူထု၇ဲ့ပဓါနကျတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စွမ်းလိုတဲ့ (၀ါ) စေတနာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘယ်အစိုး၇ဆို၇င် ခုချိန်လုပ်၇မှာက၊ အတိုက်အခံ(ပြည်ပအတိုက်အခံတွေအပါအ၀င်) ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီး၊ ကြားဖြတ်ညွန့်ပေါင်းအစိုး၇ကိုဖွဲ့၊ တနှစ်တန်သည်ဖြစ်စေအတွင်းမှာေ၇ွးကောက်ပွဲကိုကျင်းပ၊ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကနေနောင်တက်လာတဲ့အစိုး၇ကဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆွဲ၊ ပြည်ပကတတ်သိပညာ၇ှင်နဲ့၇င်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖိတ်ခေါ်၊ နိုင်ငံအတွက်အေ၇းကြီးတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စားဝတ်နေမှုကိုတိုက်၇ိုက်အကောင်အထည်ဖေါ်မဲ့ ဥပဒေတွေပြဌာန်း စသည်တို့လုပ်၇ပါမယ်။ ဒါတွေအားလုံးခပ်မြန်မြန်လုပ်၇ပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်း၇ည်သတ္တိ၇ှင်၇ှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ။ “အုပ်ချုပ်ေ၇းနဲ့အတတ်ပညာပိုင်းမှာဘာတခုမှအတွေ့အကြုံမ၇ှိနားမလည်တဲ့သူတွေကတနေ့တနေ့နိုင်ငံတခွင်လှည့်လည်ပြီး…လိုအပ်သည်များကိုလမ်းညွှန်မိန့်ကြားသွားပါသည်၊ ဆိုင်းဘုတ်ဖွင့်ပွဲကိုခလုတ်နှိပ်၍ဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်…” ဆိုတဲ့အေ၇းမပါအ၇ာမေ၇ာက်၇ုံသာမက (ရ)၇က်သားသမီးအတွက်ဘယ်လို နည်းနဲ့မှအကျိုးမ၇ှိကိစ္စတွေ၇ပ်တန်းက၇ပ်ကြဘို့လိုပါတယ်။
မြင်ေ၇ာင်ပါသေးတယ်။ နိုင်ဝင်ဘာ(၇)ပြီး၇င် အဲ့ဒီကိစ္စတွေအ၇င်ကထက်ပိုဆိုးလာမယ်ဆိုတာ…။
ဒါလောက်ဆို၇င်မြင်လောက်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။ စစ်အစိုး၇၇ဲ့မျက်လှည့်ပြပွဲမှာေ၇ွးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ပါတီအားလုံး (ကြံ့/ဖွံ့ မပါ) ကလမ်းမှားနောက်ကိုကောက် ကောက်ပါအောင်လိုက်နေကြတာ။ လူထုလိုအပ်ချက်ကိုတကယ်သိပြီးလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ဒေါ်စုကိုအပြတ်ထိမ်းထားပြီး၊ သူတို့သက်ဇိုး၇ှည်ေ၇းအတွက်ဒီေ၇ွးကောက်ပွဲကိုမလုပ်၇င်ဘဲ သန်း(၆၀)သောလူထုနေ့ချင်းညချင်းဒုက္ခေ၇ာက်တော့မလိုလိုနဲ့အ၇ုံသွင်းပြီးေ၇ွးကောက်ပွဲကိုလုပ်တာ…။
နောက်တက်လာမယ့် အစိုးရသစ်ဟာ အရင်လူဟောင်းတွေဆိုပေမယ့် အစိုးရသစ်မှာသူတို့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ မရနိုင်လောက်ပါဘူး။ အဲဒိအချိန်မှာ NLD ကို အင်းအားပြန်ဖြည့်ပြီး ပါတီမူဝါဒတွေ ကို အကောင်းအထည် ဖော်လို့ရပြီပေါ့။ သူတို့အချင်းချင်း ငွေကြေးကွာဟမူ့ ကလည်း နောင်မှာ ကြံ့ဖွံပါတီကို အင်းအားဆုတ်ယုတ် စေပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်ကတော့ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ် ဘဲလုပ်နေတာအကောင်းဆုံးဘဲ။ အနှစ် ၂၀ ကျော်တောင် စောင့်ခဲ့ပြီးပြီ ၃-၄ လလောက် တော့သည်းခံကြည့်သင့်တယ်။
သပိတ်တော့မမှောက်ကြပါနဲ့ဦး သည်းခံပြီး စောင့်ကြည့်ပါဦး………………
Yes, we can not stop the murderers doing all kinds of crimes to win the illicit election. In Burma, murderers will do whatever they like and take victory. So what can we do about it?
1.Boycott the election. NLD had shown the way we could do to oppose the election. So boycott the election.
2.The United States had agreed to take up the case of Than Shwe`s crimes to International criminal court. We all must push the governments all over the world to join hands together to bring Than Shwe to court of law.
3. Send messages to your MPs, Lords, Governors, Congressmen and Senators not to recognize this election. Push UN to ignore Red China`s crime of supporting the murderous Than Shwe. Push UN to kick Junta`s representatives out of UN General Assembly. Let UN declare the Junta illegal.
We all must do something tangible to bring down this evil empire. Doing nothing and get frustrated is not an option for all of us. Makeapledge today. We will bring down this despotic regime from power. We will bring democracy to Burma. We will punish Than Shwe.
လုပ်ကြပါဦး…. ဆရာတို့ရေ… ရပ်ကွက်ထဲက လူထုက ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းဘာမှ မသိကြဘူး။ အချိန်တန်ရင် ရပ်ကွက် ဥက္ကဋ္ဌက လူစု ပြီးရင်မဲပေးလိုက်တော့ဆိုပြီး လုပ်သွားမှာ၊ ကြံ့ဖွတ်ပါတီပဲ ရသွားရင် ဘာမှထူးမှာ မဟုတ်ဘူး…. မန်းလေးမှာဆိုရင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတောင်ပါသေး… ဒီတော့ လူထုတွေ အခြေနေမှန်ကို သိသွားအောင် …. လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းရှိရင် အားလုံးဝိုင်းပြီး…. စဉ်းစားပေးကြပါဦး